RASMI: Baarlamaanka Maraykanka Oo Loo Gudbiyey Mooshin Maamuuska Lagaga Xayuubinayo Donald Trump - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaRASMI: Baarlamaanka Maraykanka Oo Loo Gudbiyey Mooshin Maamuuska Lagaga Xayuubinayo Donald Trump
Washington (JigjigaOnline) – Xisbiga Dimuqraaddiga ayaa bilaabay xilka-xayuubin rasmi ah oo la xidhiidha madaxweynaha Donald Trump, taas oo ah inuu ka codsaday Ukraine taageero siyaasadeed, sida ay qoreen warbaahinta Mareykanka.
Go’aankan ayaa ka yimi madaxda sare ee Dimuqraaddiga Nancy Pelosi ayaa ay ku sheegtay: “waa in madaxweynuhu la kulmaa islaxisaabtan dhab ah”
Mr Trump ayaa iska fogaayey tallaabadaa doqonnimada ah, isagoona dedaalladaa ugu yeedhay kuwo ‘qashin ah’.
kooxaha musuq baadhaa eedayntooda, – taas oo loo arkayey “arrin muhiim ah” isla mar ahaantaana lagu kalsoonaan karo ayna ka timi kormeeraha guud ee sirdoonka – ayaa ay dalbadeen xisbiga Dimoqraadiga ee Kongareeska, laakiin Aqalka Cad iyo waaxda cadaalada ayaa diidey inay bixiyaan.
Mr Trump wuxuu sheegtay caddeyn la’aan in madaxweyne ku xigeenkii hore uu faragalin ku sameeyay in dacwad oogayaal reer Yukreeniyaan ahaa, si loo baadho wiilka Mr Biden, oo ah imika guddiga agaasimayaasha shirkadda tamarta ee Ukraine.
Ms Pelosi ayaa sheegtay in Mr Trump uu ku kacay “ku tagrifal sharci”, waxayna ku tilmaamtay ficilladiisa “inuu ku guuldarraystay waajibaadkiisii dastuuriga ahaa”.
“Toddobaadkan madaxweynaha wuxuu qirtay inuu weydiistay madaxweynaha Ukraine inuu qaado ficil u anfacaya siyaasad ahaan,” ayay tidhi, iyadoo raacisay: “Waa in madaxweynaha lala xisaabtamo.”
Xilka-qaadidda Mr Trump “waxay noqon doontaa musiibo”, ayuu yidhi Mr Biden. “Laakiin waa musiibodhacday isaga dartiis.” Ninkan ayaa ah, safka hore xerta kula tartami doona doorashada 2020.